नयाँ घर निर्माण गर्दै हो भने : थाहा पाउनुहोस - वाश्तुविद् डा. माधवमङ्गल भन्नुहुन्छ ... पुरा पढ्नुहोस अत्यान्तै काम लाग्छ - Eall Nepal
प्राकृतिक ऊर्जा सन्तुलनसँग सम्बन्धित वास्तु विज्ञानको यस शृंखलामा यसअघि हामीले प्रकृतिक ऊर्जा तथा सोको सन्तुलन, जग्गाको मोहडा, प्रवेशमार्ग तथा प्रवेशद्वार आदिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा चर्चा गरिसकेका छौं । यसै क्रममा यसपटक जग्गा वा प्लटको कुन दिशामा घर÷भवन निर्माण गर्दा अधिकतम प्राकृतिक ऊर्जा ग्रहण तथा कायम गरेर वास्तुबाट सम्भाव्य फाइदा बढीभन्दा बढी लिन सकिन्छ भन्ने यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।
हुन त बाटो, प्लटको मोहडा, त्यसको प्रवेशमार्ग वास्तुअनुरुप मिलेपछि उक्त जमिनमा भवन जता बनाए पनि वास्तु लाभ पाइहालिन्छ नि भन्ने धारणा पनि आउन सक्ला । यो केही हदसम्म सही पनि हो । तर, यस विज्ञानले सुझाएका समग्र विधिको एकमुष्ट संयोजन तथा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र वास्तुअनुरुपको अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ ।
त्यसो भए अब जग्गा (प्लट)को कुन भाग वा दिशामा बनाउने त भवन ? यसका लागि पुनः एकपटक प्लटका दिशाहरु बुझौं । वास्तुमा आठैवटा दिशालाई महङ्खव दिइन्छ । यी दिशा वा कोणको यकिनका लागि ९ खण्डमा विभाजन गरेर ८ दिशा अनुसरण गरिएको छ । जसअनुसार बीचका छुट्टाछुट्टै भागहरुमा पर्ने मात्र पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण हुन्छन् । यसका अतिरिक्त इशान, नैर्ऋत्य, वायव्य र आग्नेय गरी थप चार अन्य दिशाहरु पनि रहेका छन् (हेर्नुहोस् तस्वीरमा) । यी आठै दिशाको निर्धारण कम्पासका आधारमा गरिन्छ, न कि घाम उदाउने÷अस्ताउने अनुसार । अर्थात्, कम्पासको प्रयोगका आधारमा कति डिग्रीदेखि कति डिग्रीसम्म आठमध्ये कुन दिशा हो भन्ने छुट्ट्याइन्छ ।
कम्पासअनुसार उत्तर भनेको केन्द्रबिन्दु अर्थात् शून्य वा ३६० डिग्री हो, जुन ३३७.५ डिग्रीदेखि २२.५ डिग्रीसम्म पर्छ । त्यस्तै, २२.५ देखि ६७.५ डिग्रीसम्म इशान, ६७.५ देखि ११२.५ डिग्रीसम्म पूर्व, ११२.५ देखि १५७.५ डिग्रीसम्म आग्नेय, १५७.५ देखि २०२.५ डिग्रीसम्म दक्षिण, २०२.५ देखि २४७.५ सम्म नैर्ऋत्य, २४७.५ देखि २९२.५ डिग्रीसम्म पश्चिम र २९२.५ देखि ३३७.५ डिग्रीसम्म वायव्य कोण हुन्छ । (हे. तस्वीर)
घर बनाउने उपयुक्त दिशा
दिशाको बारेमा जानकारी भइसकेपछि घर÷भवन बनाउनुपर्ने उपयुक्त कोण पहिचान गर्न सहज हुन्छ । घर बनाउँदा जहिल्यै पनि सकेसम्म जग्गाको नैऋत्य (दक्षिण–पश्चिम) मा बनाउनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । यसको अर्थ यो कोण च्यापेर बनाउने भनेको होइन । किनकि घरको चारैतिर झ्याल राख्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । एउटा दिशामा च्यापेर बनाउँदा त्यता झ्याल राख्ने ठाउँ नहुन पनि सक्छ । यसैले सम्पूर्ण जग्गाको दक्षिण–पश्चिमतिर बनाउँदा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने हो ।
यसको कारण – उत्तरबाट आउने जियोम्याग्नेटिक इनर्जी (भूचुम्बकीय ऊर्जा वा वेल्थ इनर्जी) र पूर्वबाट आउने प्राणिक वायु (लाइफ फोर्स वा हेल्थ इनर्जी) प्टलमा सहजै आउन र घरमा बढीभन्दा बढी सञ्चित भएर बस्न सकोस् । किनकि ती दुई इनर्जी प्लटमा प्रवेश गरेर एउटा बिन्दुमा मेल भएर आएपछि (बायो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी) प्रसार भएर जाने ठाउँ प्लटको दक्षिण–पश्चिम हो । यसकारण यही दिशामा घर बनाइयो भने सवैभन्दा महङ्खवपूर्ण हुने बायो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी हामीले पूरा पाउँनेछौं ।
यसरी नैऋत्यमा मिलाएर घर बनाइएको छ भने त्यसले दिने वास्तु लाभको अंक १० मा १० नै हो । यस्तै, दोस्रो उत्तम दक्षिण कोण हो जुन १० मा ९ राम्रो भनिन्छ । यसपछि क्रमशः पश्चिममा बनाउँदा १० मा ८ र दक्षिण–पूर्वमा ६ अंकबराबर मानिन्छ । यी चारवटा दिशा लाभको अंकभारका आधारमा क्रमशः राम्रा हुन् । वायव्य कोण (उत्तर–पश्चिम) सम्म मध्यम हो । यसलाई ५ अंकभार दिइएको छ ।
यसबाहेक अन्य कोणहरुमा भवन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसमध्ये पनि इशान (उत्तर–पूर्व) कोण सबैभन्दा खराब मानिन्छ । यो कोणमा घर बनाउँदा पाइने वास्तुलाभ शून्य (०) बराबर हुने मानिएको छ । किनकि उत्तरबाट आउने जियोम्याग्नेटिक इनर्जी (भूचुम्बकीय ऊर्जा) र पूर्वबाट आउने प्राणिक वायु (लाइफ फोर्स वा हेल्थ इनर्जी) जग्गामा प्रवेश गर्ने कोण नै यही हो । यसैले यही कोणमै घर बनाइदिँदा उक्त इनर्जी जग्गामा छिर्ने बाटो नै छेकिन्छ, अथवा घरमा ठोक्किएर फर्किएर जग्गाबाहिर जान्छ । यी दुई इनर्जीको मेल भएर बायो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी उत्पन्न हुन अवरोध सिर्जना हुनेछ । प्राकृतिक ऊर्जाबाट अधिकतम वास्तु लाभ लिनका लागि बायो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी सिर्जना भएर प्लटमा राम्ररी फैलनु आवश्यक हुन्छ ।
उत्तरलाई पनि २ अंकभार मात्र दिइएको छ । किनकि यो दिशामा घर बनाउँदा ‘म्याग्नेटिक इनर्जी’ जग्गाभित्र आउने बाटो अवरोध हुन्छ, अर्थात् जग्गाभित्र आउनै नपाई घरमा ठोक्किएर बाहिर जान्छ । मस्तिष्कले राम्ररी काम गर्नका लागि म्याग्नेटिक इनर्जी अत्यावश्यक छ । यो इनर्जी प्रवाहमा व्यवधान भए मस्तिष्कले चुस्त रुपमा काम गर्न नसक्ने र ‘डिसिजन मेकिङ’ राम्ररी गर्न नसकिने हुँदा कामहरुमा असफल हुने सम्भावना बढ्छ । यसकारण प्लटको उत्तरमा घर बनाइएको अवस्थामा आयस्रोत कम हुनेछ । त्यस्तै, पूर्वबाट ‘हेल्थ इनर्जी’ आउने हुँदा यो कोणमा घर बनाउँदा उक्त इनर्जी आउन छेकिन्छ । यसैले पूर्वीकोणमा घर बनाउँदा ‘हेल्थ इनर्जी’ छेकिने भएकाले त्यस्तो घरमा बस्ने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा समस्या आइरहने सम्भावना रहन्छ । अतः प्लटको पूर्वमा पनि घर बनाउनु अनुपयुक्त हो ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा जतिजति दक्षिण–पश्चिम कोणसँग तालमेल मिलाएर घर बनायो उक्त घरमा बस्ने व्यक्तिको उत्तरबाट आउने चुम्बकीय ऊर्जाका कारण आर्थिक स्रोत राम्रो हुने र पश्चिमबाट आउने हेल्थ इनर्जीका कारण स्वास्थ्य सुदृढ हुने सम्भावना बलियो हुन्छ । यी कोणभएर घर बनाएर उत्तर र पूर्व दुवैतर्फबाट प्रवेशद्वार (गेट) राख्न सकिने हुँदा ‘वेल्थ इनर्जी’ र ‘हेल्थ इनर्जी’ दुवै जग्गामा राम्रोसँग प्रवाह भएर आउन पाउनेछ । जतिजति यसविपरीत कोणमा घर बनायो त्यति नै यी दुई इनर्जी कम–कम भएर जानेछ ।
सुन किन्दै हो हो भने ठगिनबाट बच्नुहोस : कसरी थाहा पाउने त नक्कली र सक्कली सुन